देश बनाउन हिडेकाहरु नारकीय जिवन जिउँदै [फोटो र भिडियो] || Postpati : News For All
देश बनाउन हिडेकाहरु नारकीय जिवन जिउँदै [फोटो र भिडियो]
केबी गुरुङ २०७६ जेष्ठ २७, सोमबार प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय :6मिनेट
जेष्ठ २८, रोल्पा । गरिबीको चपेटा मुनि थिचिएकाहरु मुक्ति खोज्दै १० बर्षसम्म जनयुद्द लडे । अनि युद्द लडेका सिमित मानिसहरुको त्यो ‘स्वर्णिम एक दिन’ आयो तर धेरैको जिबनमा त्यो ‘एक दिन’ कालो रात बनेर आयो । बरु नारकीय जिबन जिउन बिबस भए ।
यसकै उदाहरण हुन् रोल्पाकी पुर्ब लडाकु निर्मला बिक ‘कामरेड साधना’ ।
पुर्ब लडाकु क. साधना/तस्बिर दिनेश सुबेदी
सामाजिक मुक्ति र परिवर्तनको सपना बोकेर जिबनलाई बलिदान दिन तम्सिएकि ‘साधना’ले सायद युद्दपछि नारकीय जिबन जिउनु पर्ला भन्ने कल्पना समेत गरेकी थिईनन ।
साँच्चै भन्दा निर्मला युद्दमा सामेल हुँदा पिंजडाको जिबनबाट खुल्ला आकाशमा उडेको त्यो क्षण थियो । यसका केहि कारणहरु छन् ।
पहिलो कारण; निर्मलाको त्यो जिबन बर्गीय विभेद भित्र बिकट बस्तीमा गरिबी र अशिक्षाको समुन्द्रमा तैरिरहेको थियो । बिहान र साँझ भोको पेट टार्न, नाङ्गो शरीर ढाक्न धौधौ थियो । शहरमा बस्ने धनि मानिसहरु देश-विदेशबाट प्रविधि युक्त शिक्षा लिरहेका बेला, दुर्गम रोल्पाको बिकट गाउँमा अशिक्षाको अँध्यारो बत्तिमुनी निर्मला हराई रहेकी थिइन् ।
दोश्रो, लैंगिक विभेदको कसिले उनको जीवनलाई हलचल गर्न नपाउनेगरि कसि रहेको थियो । उनको जिबन सामाजिक पुरुषबादको जाँतोमा पिसिरहेको थियो । छोरी जाति भएर जन्मिदा संस्कार र नैतिकताका करेन्टहरु प्रवाहित तारबारहरुले जिबन घेरिएको थियो । जतिबेला लैंगिक विभेदको चंगुलमा उभिएकी थिइन् । पुरुषको भागमा सिंगो संसार थियो, निर्मलाको भागमा घरको कुनो, चुलो, चौको र पानी-पधेरो थियो ।
बिरामीले चेत गुमाएकी निर्मला बिक ‘साधना’/तस्बिर दिनेश सुबेदी
तेस्रो, सामाजिक विभेद वा असमानताको भयङ्कर जालोमा उनको समुदाय फसेको थियो । उनि तल्लो जाति भनिने दलित समुदाय भित्र पर्थिन । समाजलाई उनको जोवन चल्थ्यो तर उनले छोएको पानी चल्दैनथ्यो । समाज उनको घर भित्र पस्थ्यो तर उनलाई अरुको घरभित्र पस्न छुट थिएन । उचो निचो जातको दलदलमा फसेर समाजले संधै उनलाई शिकार गरिरहन्थ्यो ।
उनको यस्तै जिबन परिबेशमा जनयुद्दको कुरो चल्यो । त्यहि जनयुद्दले बर्गीय विभेद, जातीय विभेद र लैंगिक विभेदलाइ समुल नष्टगरि साम्यवादी ब्यबस्था ल्याउन, अर्थात कोहि गरिब कोहि धनि हुने व्यबस्थाको अन्त्य, पुरुष र महिला बिचको भेदभाबको अन्त्य, ठुलो सानो जातको अन्त्य गर्न जनयुद्द लड्ने कुराले उनलाई हौस्यायो ।
तसर्थ यस्ता मानव जन्जिरहरुलाई तोड्न पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा भएको जनयुद्दमा सामेल भएकी थिइन् निर्मला बिक । यसरि समानताको खुल्ला आकाशमा एउटै हैसियत बोकेर उड्दाको खुसीको क्षण यी जाति, बर्ग र लिङ्गहरुलाई जनयुद्द एउटा साँच्चै कोषेढुंगा थियो ।
त्यसैले त जनयुद्दमा १७ हजार मानिसहरु हाँसी-हाँसी मर्न तयार भए ।
तर सिमित परिवर्तन बाहेक उस्तै ब्यबस्था जीवित रहंदा युद्दताका फुरेका खुसीहरू अनयासै दुखि बने । मनहरु पत्त्थर बने । तनहरु पागल भए । खुसि बोकेर युद्दमा लडेकाहरु आज मनोरोगि भएर जिउन बिबस भए ।
कामरेड प्रचण्डलाई दुई-दुई पटक प्रधानमन्त्री पद मिल्दैमा देश परिवर्तन भएको मानिदैन । सैन्य कमान्डर कामरेड पासाङ्ग दुई-दुई पटक उपराष्ट्रपतिमा पदभार हुँदैमा जनताले मुक्ति पाएको भन्न सकिदैन । अन्य जनयुद्दका ए.बिसी.डी कामरेडहरु काठमान्डौको राजधानीमा मन्त्रि हुँदैमा जनताले चाहेको परिवर्तन सहितको गणतन्त्र आयो भन्न मिल्दैन ।
युद्द सकिएको साढे दुइ दशक लामो समय पार गर्दासम्म पनि युद्द्का मुद्दाहरुलाई ब्यबस्थापन नगर्नुलाई सम्झौता भन्नु कि परिवर्तन भन्नु ? यो बिषय कामरेड केपी ओली र प्रचण्ड दाहालले बुझ्ने कुरा हो ।
अहिले पुर्ब लडाकु निर्मला बिकले नारकीय जिबन बिताउनु पर्यो । उनको नारकीय जिबन सिहार्न मानव आश्रमहरु नै जागरुक हुनु पर्यो । परिवर्तन र समृद्दीको नारा बोकेको देशमा नारकीय जिबन बिताई रहेकी निर्मलालाई राज्यले नै जिम्मा लिन हैसियत राख्दैन, बरु गैरसरकारी संस्थाहरु जागरुक हुनुपर्ने स्थिति छ ।
निर्मलाका सर्बोच्च कमान्डरहरु, अर्थात जनयुद्दको मूल नेतृत्वले राजधानीमा समृद्द नेपालका सुखी नेपाली भन्दै सत्ता चलाई रहेका छन् । आर्को तिर झुण्ड झुण्डमा फुटेका माओबादि घटकका पार्टीहरु क्रान्तिको सपना देखिरहेका छन् ।
देश परिवर्तनको मुद्दा बोकेको त्यो जम्बो पार्टीलाई टुटफुटमा भागबण्डा हुँदा झनै कामरेड साधनाहरु बिचल्ली परेका हुन् ।
उद्दार हुँदै गरेकी आमाको अनुहार हेर्दै छोरा/तस्बिर मानवसेवा आश्रम
मतलव, युद्द लड्ने सिंगो पार्टी चिराचिरा हुँदा देशले चाहेको जस्तो परिवर्तन पाएन । फलस्वरूप निर्मलाहरु मानसिक रुपमा बिचिप्त भए । गरिब अभावको चपेटामा अल्झिरहे । बिचारहरु खण्डित भए । एकले आर्कोलाई प्रतिबन्दित गराउने स्थिति आयो । मुक्तिका लागि संगै लड्नेहरु आज बर्गदुश्मनमा विभाजित भए ।
हिजो चुलोचौकोमा अल्झिएका निर्मलाका हातहरु बन्दुक खेलाउन तम्सिएपछि फेरीपनि कमान्डर कामरेडले निरिह अयोग्य बनाई दिए । आखिर मन न हो, जो पग्लिन सक्छ, बहकिन सक्छ र पागल पनि हुन सक्छ ।
निर्मला उर्फ कामरेड साधनालाई वर्तमान उपराष्ट्रपति तथा तत्कालीन माओवादी सेनाका सैन्य कमान्डर नन्दबहादुर पुन पासाङले लडाकुसम्बन्धी तालिम दिएका थिए, लड्न भिड्न सिकाएका थिए ।
निर्मलाको बन्दुकको बलमा विभिन्न लडाइँ लडेका अर्का कमान्डर रोल्पाकै वर्षमान पुन अहिले ऊर्जामन्त्री छन् । उनले यसपाला चुनाव पनि जिते । माओवादी लडाकुको पाँचौं डिभिजन दहवन रोल्पाका कार्यवाहक कमान्डर राजबहादुर बुढा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छन।
मानवसेवा आश्रमले उद्दार गर्दै निर्मला बिकलाई /तस्बिर मानवसेवा आश्रम
निर्मलाको घर भएकै क्षेत्रबाट २०६४ सालमा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चुनाव जितेर पहिलो पटक प्रधानमन्त्रि भए । २०७० सालमा माओवादी नेत्री ओनसरी घर्तीले चुनाव जितिन र सभामुख बनिन्न् ।
तर उनीहरु कसैको नजर मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेकी निर्मलामाथि परेन । उनलाई सम्झिन पनि चाहेनन ।
रोल्पा त्रिवेणी ५ जुगार जबरबोटकी निर्मला विगत ८ बर्षदेखी मनोरोगकको शिकार भएकी छन् । माओवादी लडाकुको पाँचौ डिभिजन ब्यारेक दहबनमा हुँदै निर्मला विरामी परेकी थिइन । त्यहि वीचमा उनलाई उपचारका लागि पतिले भारत लगेका थिए । भारतमा मजदुरी गर्दै उनको उपचार गराइएको भनिएपनि निको नभएपछि घरमा फिर्ता ल्याएको थियो ।
चरम गरिबीमा बाँचिरहेका निर्मालाको परिवारसँग उनको उपचार गर्ने सामर्थ्य थिएन । निर्मलाले उनको आवश्यकताको आधारमा भन्दापनि सासुआमाको फुर्सद मिलेको अवस्थामा स्याहार पाउँथिन ।
उता राजधानीमा कामरेड केपी ओलीलाई खासै प्रबाह हुने कुरा भएन तर यिनैको निर्मलाले बोकेको बन्दुकबाट सत्तामा पुगेका अध्यक्ष प्रचण्ड, उपराष्ट्रपति पासाङ्ग, सभामुख कृष्ण महरा, गृहमन्त्री बादल, उर्जामन्त्रि अनन्तले राजधानीमा समृद्दीको देश चलाई रहेका छन् ।
तर यता निर्मलालाई भने मानव आश्रम संस्थाले उद्धार गरि उपचार गरिरहेको छ । निर्मलालाई स्वास्थ्य परिक्षण गराई औषधी सुरुवात गर्ने आश्रमले बताएको छ । उक्त आश्रमले निर्मला सहित ८५२ जना सहयोगापेक्षी मानवहरुलाई बिगत ७ बर्ष देखि संरक्षण दिइरहेको छ ।
(उनका ८ बर्षिय बेसहारा छोरा जिबन बिकलाई पढ्नको लागि आर्थिक सहयोग गर्न चाहानुहुने मनकारिहरुले उनको बैंक खाता नम्बर, ०७१०५०८०२५०४६७ (नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, शाखा जुँगार रोल्पा) मा सक्दो सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ )
शब्द चित्र के.बि. गुरुङ